Technical Support | Shwe Web Hosting | Myanmar
Shwe Hosting မှာ customer orientation culture ရှိသောကြောင့် Shwe Hosting ရဲ့ customer များကိုစောင့်ရှောက် ပုံမှာတခြား company များထက် ပိုမိုကောင်းမွန်မှာပါ။ Customer တွေသာမရှိလျှင် Shwe Hosting ဆိုတာမရှိနိုင်ပါဘူး။ အဲ့ဒါကြောင့် customer များကိုစောင့်ရှောက်ရမဲ့တာဝန်မှာ Shwe ရဲ့အကြီးမားဆုံးအလုပ်တစ်ခုပါ။
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ အခြေစိုက် မြန်မာ support team မှ အခမဲ့ Technical Support ပေးနေတာပါ။ Shwe Hosting မှ ဝယ်ယူထားသော Domain များ၊ Hosting များ၊ Server ပြသနာများ၊ Billing terms များ၊ Hosting account upgrade ပြုလုပ်ချင်းများ၊ Renew လုပ်ချင်းများ အားလုံးအတွက် Support ကိုဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်။
Support Ticket မဖွင့်ခင် အောက်ပါ Frequently Asked Question (FAQ) များနှင့် Video Tutorial များကိုကြည့်ရှုပါ။
Support department သို့မေးသော အမေးအများဆုံး မေးခွန်းများ၏ အဖြေများ၊ အဖြစ်တတ်ဆုံး ပြသနာများ၏ အဖြေများကို ဤနေရာတွင်စုစည်းထားပါတယ်။
FAQ များကို ဖတ်ရှုရန်
ဒီ video tutorial များကိုကြည့်ပြီး cPanel ကျွမ်းကျင်သော webmaster တစ်ယောက် အချိန်တိုအတွင်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ cPanel ထဲတွင် Email account များပြုလုပ်ခြင်း၊ FTP account များပြုလုပ်ခြင်း၊ MySQL database များပြုလုပ်ခြင်း အစရှိသည်တို့အားလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
Video Tutorial များကြည့်ရှုရန်
အသုံးပြုသူအများစုက FAQ နှင့် Video Tutorial များကို ကြည့်ပြီး သူတို့ရဲ့ပြသနာအများစုကို ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍သင်၏ မေးခွန်း/အခက်အခဲသည် ထို page များ ထဲတွင်မရှိပါက အောက်ပါ link မှ Support Ticket ဖွင့်ပါ။
သတိပြုရန်။ ။ သင်သည် Shwe Hosting ၏ လက်ရှိ customer ဖြစ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။ ဝယ်ယူရန်စဉ်းစားနေသူများ မေးခွန်းများရှိပါက contact us page မှသာ Sale Department သို့ဆက်သွယ်ပါ။
Support Ticket ဖွင့်ရန်
ဒီနေ့ (3 July, 2022) အတွက် estimated response time မှာ6နာရီ ဖြစ်ပါတယ်။
Our Burmese/English speaking sale representatives and technicians are instantly willing to assist you with any questions or concerns you may have regarding your hosting account, server issues, billing terms, upgrades, and troubleshooting. But please give itatry to our FAQs and Video Tutorials (at below links) before you contact to our Support department. Our tutorials will give you step-by-step guide to solve common issues.
Shwe Web Hosting © 2008-2022 NetScriper Co., Ltd. Registered in Myanmar & United Kingdom. All rights reserved.